Deotoronomia 32: 1-52
Deotoronomia 31 Deotoronomia 32 Deotoronomia 33
Ny amin'ny Vatolampy, tanteraka ny asany; Fa ny làlany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra mahatoky Izy, ka tsy misy ratsy ao aminy; Marina sy mahitsy Izy.
Efa nasian-dratsy Izy; Tsy zanany ireny -- tsininy izany; Taranaka miolakolaka sady efa nivadika izy.
Toy ny voromahery manaitra ny ao amin'ny akaniny Ka manidintsidina eo ambonin'ny zanany, Dia toy izany no namelarany ny elany sy nandraisany azy Ary nitondrany azy teo ambonin'ny elany, --
Sy rononomandrin'omby sy rononon'ondry aman-osy Mbamin'ny tavin'ny zanak'ondry Sy ondrilahin'i Basana sy osilahy Ary vary izay vokatra indrindra; Ary nisotro divay mahery avy tamin'ny ran'ny voaloboka hianao.
Nihanatavy Jesorona[ Jesorona dia anaran'ny Isiraely. ] ka namely daka -- Efa matavy hianao sady vory nofo no vaventibe -- Dia nahafoy an'Andriamanitra Izay nanao azy izy, Ary nanamavo ny Vatolampy famonjena azy.
Namono zavatra ho fanatitra ho an'ny demonia[Heb. ireo tompo.] izay tsy Andriamanitra izy -- Dia andriamanitra tsy fantany, Fa andriamanitra vao niseho, Izay tsy natahoran'ny razanareo.
Ary Jehovah nahita izany ka nandà Noho ny fahasosorany tamin'ny zananilahy sy ny zanani-vavy.
Fa arehitra ny afon'ny fahatezerako,[Heb. misy afo mirehitra amin'ny fahatezerako.] Ka mandoro hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita any ambany indrindra, Sady mandevona ny tany mbamin'ny vokatra ao aminy Ary mampirehitra ny fanambanin'ny tendrombohitra aza.
Havangongoko aminy ny loza betsaka; Ary holaniko aminy ny zana-tsipìkako:
Hofezahin'ny mosary izy sady holanin'ny areti-mandripaka[Na: zava-mahamay.] Sy ny fandringanana mangidy; Ary nifim-biby no hampandehaniko aminy Jesorona dia anaran'ny Isiraely. Mbamin'ny poizin'ny biby mpikisaka amin'ny vovoka.
Eny ivelany dia ny sabatra no hahafaty ny zanany, Ary ao amin'ny efi-trano dia ny fampahatahorana -- Na ny zatovolahy na ny zatovovavy, Na ny zaza minono na ny fotsy volo.
Raha tsy ny fireharehan'[Heb. fahasosoran'.] ny fahavalo no natahorako, Andrao diso hevitra ireny mpandrafy azy ireny Ka hanao hoe: Ny tànanay no avo; Fa tsy Jehovah tsy akory no nanao izany rehetra izany.
Enga anie ka hendry izy mba hahalala izao[Na: Raha hendry izy, dia hahalala izao.] Ka hahafantatra izay ho farany.
Fantaro ankehitriny fa Izaho dia Izaho no Izy, Ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, Ary Izaho no maharatra sy mahasitrana, Ka tsy misy mahafaka amin'ny tànako.
Fa manangana ny tànako amin'ny lanitra Aho Ka manao hoe: Raha velona koa Aho mandrakizay:
Raha manasa ny sabatro manelatselatra Aho, Ka voarain'ny tànako ny fitsarana, Dia hampanodiaviko ny mpandrafy Ahy ny ataony, Ary hovaliako ny mankahala Ahy.
Hataoko mamon-dra ny zana-tsipìkako, Ary ny sabatro hihina-nofo, Dia ny ran'ny voavono sy ny babo Mbamin'ny lohan'izay lehibe amin'ny fahavalo.
Mihobia, ry jentilisa mbamin'ny olony;[Na: ry jentilisa olony.] Fa ny ran'ny mpanompony no hovaliany. Hamaly ny mpandrafy Azy Izy, Ary hanao fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olony.
Fa tsy zava-poana ho anareo izany, fa izany no fiainanareo; ary izany zavatra izany no hahamaro andro anareo eo amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana, rehefa tafita an'i Jordana hianareo.
Dia aoka ho faty ao amin'ny tendrombohitra izay iakaranao hianao, ka ho voangona any amin'ny razanao, tahaka ny nahafatesan'i Arona rahalahinao tao an-tendrombohitra Hora sy ny nanangonana azy any amin'ny razany,
satria nivadika tamiko teo amin'ny Zanak'Isiraely hianareo tao amin'ny ranon'i Meriba any Kadesy, tany an-efitra Zina; fa tsy nahamasina Ahy teo amin'ny Zanak'Isiraely hianareo.
Fa hahatazana ny tany eo anoloanao ihany hianao, kanefa tsy hiditra any amin'ny tany izay omeko ny Zanak'Isiraely.